Soo degso Tom Anotonov-225 MRIYA / DREAM FSX - Rikoooo
Shidaalka Antonov AN-225 FSX & P3D
downloads 83 654
Naqshaddii asalka ahayd ee uu qoray Thomas Ruth. Boorarka 2D ee cusub ee shaashadda ballaaran, cabirrada xml iyo la-qabsiga VC ee uu sameeyay Philippe Wallaert. Xidhmada Rikoooo
Halkan waxaa ku yaal Antonov An-225 Mriya oo leh xayndaabka booska Buran ee 'Barnaamijka Booska Soofiyeedka' ee dhabarka. Diyaaraddaan waa mid weyn oo dhib kugu noqon doonta inaad ka takhalusto, isticmaasho xargaha oo hoos u dhigto qaddarka shidaalka, haddii kale waxaad kusii jiri doontaa dhulka. Waxaa lagu daray xayndaab buuxa oo ah 3D, moodal duulimaad aad u macquul ah, dhawaqyada saxda ah iyo 2D guddi loogu talagalay 16: shaashadaha 9.
The Antonov An-225 Mriya ( "riyadii" ee Ukraine) waa diyaarad Jumbo gaadiidka ah, kaas oo la soo saaray ee USSR (Soviet Socialist Republic ee Ukraine) oo helay sida magaca code for NATO "Cossack" ah (An-124 ahaa mid ka mid ah "Condor"). Tani waa diyaarad of size cajiib ah waa awood si ay ugu rarataan culaysyo badan oo culus ka badan masaafo badan.
Tani waa diyaarad ugu dheer oo cuslaa ee adduunka, laakiin labaad ee shuruudaha size, dambeeya seaplane ku Rafaa H-4 Hercules. Sida laga soo xigtay Anatoly Boulanenko, ku-An 225 ayaa marna la isticmaalay si ay awood buuxda oo had iyo jeer isaga ka dib, u-An 225 sidoo kale waa dagaalyahan ah oo ku anfacaya. Indeed, intii lagu jiray mudaaharaad ka badan Bourget ah, ayuu u soo jeestay xagal 45 ° la Slaam u Soviet meel Buraan ee tan 62 lifaaqan sooctey.
Qore: Naqshadeynta asalka ah ee uu qoray Thomas Ruth. Boorarka 2D ee cusub ee shaashadda ballaaran, cabirrada xml iyo la-qabsiga VC ee uu sameeyay Philippe Wallaert. Xidhmada Rikoooo